तेस्रो घण्टामा ४६.३६ अंकले बढ्यो नेप्से, ३ अर्ब ३२ करोड कारोबार — Arthatantra.com
Arthatantra.com > मुख्य समाचार > तेस्रो घण्टामा ४६.३६ अंकले बढ्यो नेप्से, ३ अर्ब ३२ करोड कारोबार
काठमाडौं । बुधवार नेप्से कारोबार भएको तेस्रो घण्टामा ४६ दशमलव ३६ अंकले बढेर १ हजार ५९१ दशमलव ५५ विन्दुमा पुगेको छ । १ हजार ५४७ दशमलव २१ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक कारोबारकोे यस अवधिमा ३ प्रतिशत बढेको हो ।
यस अवधिसम्म कारोबारमा आएका १२ समूहको परिसूचकमध्ये व्यापार समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी ११ समूहको परिसूचक बढ्दा समग्र नेप्से बढेको हो । तेस्रो घण्टाको कारोबारमा १७९ ओटा कम्पनीको रू. ३ अर्ब ३२ करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
यस अवधिमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक मूल्य रू. १ हजार ४९२ मा कारोबार भइरहेको छ । कारोबार रकमकै आधारमा दोस्रोमा नेपाल बैंकको रू. १५ करोड ३६ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । सो समयमा बैंकको शेयर मूल्य रू. ३०७ रहेको छ ।
२०७६ फागुुण १४ गते १४:०५ मा प्रकाशित
ब्रिक्स सम्मेलनको समापनमा सबै राष्ट्रप्रमुख मोदी जस्तै …
International marathon in Kakani
बाढी र पहिरोका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ४९ पुग्यो (अपडेट)